Knoppix 8.6 inosvika yakavakirwa paDebian 10, Kernel 5.2 uye zvimwe zvakawanda | Linux Vakapindwa muropa
Knoppix 8.6 inosvika yakavakirwa paDebian 10, Kernel 5.2 uye zvimwe zvakawanda
Klaus knopper (iye mugadziri weKnoppix) yakaunzwa maawa mashoma apfuura kuburitswa kweshanduro nyowani yekugovaniswa kwayo kweKnppix 8.6, umo iyi vhezheni nyowani inosvika neyekutanga seti ye bootstrap zvinyorwa uye inosanganisira inounzwa kunze kweDebian Stretch package.
Iyo yekushandisa interface inoenderana neLXDE lightweight desktop nharaunda, yakavakirwa pahwaro hweraibhurari yeGTK uye inokwanisa kushanda mune yakaderera magetsi masisitimu. Panzvimbo peyakajairwa SysV yekutanga system, imwe Microknoppix boot system inoshandiswa, iyo inokasira zvakanyanya kukumikidza bhuti maitiro nekuda kwekufananidza sevhisi kuvhurwa uye kunonoka kutangisa kwekutanga.
Ipo paunenge uchishandisa USB Flash, marongero emushandisi uye anowedzera akaisirwa mapurogiramu haatsakatike mushure mekutanga zvekare: data rakachengetwa pakati pezvikamu rakaiswa muKNOPPIX / knoppix-data.img faira, iyo, kana ichidikanwa, Iyo Inogona kunyorera neAES-256 algorithm .
1 Knoppix 8.6 Makiyi matsva Akakosha
2 Dhawunirodha uye tora Knoppix 8.6
Knoppix 8.6 Makiyi matsva Akakosha
Sezvambotaurwa pakutanga, mune iyi vhezheni itsva ye Knoppix 8.6 inowirirana neDebian Buster base, nepo yevatyairi vevhidhiyo uye zvigadzirwa zvemukati izvo zvinotumirwa kubva kuDebian / kuyedzwa uye Debian / kusagadzikana.
Izvo zvikamu zve iyo grafiki stack yakagadziridzwa kuita xserver 1.20.4.
Kune moyo weiyo system, Linux kernel yakagadziridzwa kuita vhezheni 5.2 ine cloop uye aufs zvigambaUye zvakare, Knoppix 8.6 inotsigira maviri maseti ezviyo zve32-bit uye 64-bit masisitimu.
Paunenge uchishandisa LiveDVD pane masisitimu ane 64-bit CPU, iyo 64-bit kernel inotakurirwa otomatiki.
Kune makomputa akashongedzerwa neCD chete dhiraivha, ipfupi bhutsu mufananidzo inoiswa mune Knoppix dhairekitori, ichikubvumidza iwe kubhuroka kubva kuCD uye kushandisa iyo yasara yeiyo yekugovera package ine USB drive.
Iye zvino muKnoppix 8.6 LXDE inoshandiswa nePcmanfm 1.3.1 faira maneja, asi pasuru inosanganisira KDE Plasma (yakaitwa nesarudzo yebhoti "knoppix64 desktop = kde") uye GNOME ("Knoppix64 desktop = gnome").
Kune chikamu cheiyo system pasuru, isu tinogona kuwana shanduro idzva dzinosanganisira Waini 4.0, qemu-kvm 3.1, Chromium 76.0.3809.87, Firefox 68.0.1 (yakakwana neUblock Chibviro neNoscript), LibreOffice 6.3.0-rc2, GIMP 2.10.8.
Izvo zvakakoshawo kuratidza izvo "Tor" webhu bhurawuza yakawedzerwa uye inowanikwa kuvhurwa kuburikidza ne Knoppix menyu.
Zvakare zvinosanganisirwa mavhidhiyo edhita akadai se: kdenlive 18.12.3, openshot 2.4.3, photofilmstrip 3.7.1, obs-studio 22.0.3, Mediathekview 13.2.1 midhiya raibhurari manejimendi sisitimu, OwnCloud uye NextCloud vatengi vekuchengetedza gore (2.5.1), Caliber 3.39.1 e- bhuku rekuunganidza manejimendi system, Godot3 3.0.6 injini injini, RipperX 2.8.0 odhiyo / vhidhiyo transcoders, Handbrake 1.2.2, gerbera 1.1.0 midhiya server.
Kune rimwe divi uye pasina kukosha kwakakosha kune zvakare kusarudzwa kwezvirongwa zvekushanda nemaprinta e3D uye kugadzirwa kweiyo 3D modhi: OpenSCAD 2015.03, Slic3r 1.3 (ye 3D kudhinda), Blender 2.79.b uye FreeCAD 0,18, XNUMX
De dzimwe shanduko dzinomira mushanduro iyi nyowani yekuparadzira ndeiyi:
Tsigiro izere yeUFI uye UEFI Yakachengeteka Boot
Iyo dhirivhari inosanganisira iyo ADRIANE inorira menyu, iyo inosanganisira kuitiswa kwenzvimbo yemushandisi kunoenderana nepfungwa yekutenderera kwezwi. Nezve kuverenga kwezwi kwezviri mukati memapeji, iyo Orca system inosanganisirwa. Injini yekucherechedza zvinyorwa zvakavezwa kunge wedji-yakaita.
Iko kugona kwekuwedzera otomatiki chikamu nemushandisi dhata mu USB Flash, iyo isingade reboot.
Iko kugona kwekugadzirisa marongero kana uchiteedzera kuUS Flash uchishandisa iyo flash-knoppix yekushandisa.
Wakawedzera modes ekutanga Knoppix pamidziyo uye masisitimu ehurongwa: "Knoppix paKnoppix - KVM", "Knoppix paDocker" uye "Knoppix paChroot".
Dhawunirodha uye tora Knoppix 8.6
Kune avo vanofarira kugona kuyedza kana kuisa iyi vhezheni itsva yekuparadzira pamakomputa avo. Iwe unofanirwa kuziva kuti iyo 4.5 GB yakamonyaniswa LiveDVD mufananidzo unowanikwa kurodha pasi.
Dhawunirodhi yekubatanidza ndeiyi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Knoppix 8.6 inosvika yakavakirwa paDebian 10, Kernel 5.2 uye zvimwe zvakawanda
LibreOffice 6.2.6 inodzivirira anorwisa ari kure kuti asaite kodhi yekumanikidza
RaspArch, yakavakirwa paArch Linux, ikozvino inoenderana neiyo Raspberry Pi 4